ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်အမေရိကန်များကိုပိုမိုလေ့ကျင့်ရန် ဦး ဆောင်လိမ့်မည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
Nick Obradovich ၏လေ့လာမှုအရ 'Nature Human Behavior' ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်အမေရိကန်များကိုပိုမိုလေ့ကျင့်ရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်.
ဆောင်းရာသီသည်အအေးနည်းလာသောအခါလူများသည်ပြင်ပသို့ထွက်ကာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုကြသည်။ ရာစုအကုန်မှာတော့ မြောက်အမေရိကဒါကိုတာ၊ မင်နီဆိုတာနှင့်မိန်းကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်သူများသည်များစွာအကျိုးရှိနိုင်သည်။ အဆိုအရ လေ့လာ, ၄ င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ၂.၅% တိုးနိုင်သည်။
သို့သော်ကံမကောင်းစွာတောင်ဘက်တွင်နေထိုင်သူများ၊ အထူးသဖြင့်သဲကန္တာရအနီးတွင်အပြင်ဘက်ရှိအပူချိန်များသည်မခံနိုင်လောက်သောကြောင့်အိမ်၌အချိန်ပိုပေးရဖွယ်ရှိသည်။ အရီဇိုးနား၊ နီဗားဒါးတောင်ပိုင်းနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားအရှေ့တောင်ပိုင်းတို့သည်ရာစုနှစ်ကုန်တွင်လှုပ်ရှားမှုအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်.
ဤကောက်ချက်ကိုရရှိရန် Obradovich သည်အစိုးရ၏စစ်တမ်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုအလေ့အထများ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့် နေ့မှစ၍ ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူကသဘောပေါက်လာတယ် သာမိုမီတာသည် ၂၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ်အထက်ကိုဖတ်သည့်အခါလူအများစုကထွက်ရန်ဆန္ဒနည်းသည်.
သို့သော်အချို့သောမြို့ကြီးများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာအကျိုးရှိသည်။ အဖြစ်မှန်မှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်အကျိုးအမြတ်ထက်ခြိမ်းခြောက်မှုပိုဖြစ်သည်၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပါမောက္ခ Dr. Howard Frumkin ပြောသလို အပူပိုင်းဒေသတွင်အင်းဆက်ပိုးမွှားများရောက်ရှိလာခြင်းသည်လူအများအပြား၏ဘဝအသက်တာကိုအမေရိကရှိသာမကကမ္ဘာဂြိုလ်၏ရာသီဥတုရှိသည့်နေရာအားလုံးတွင်ပါအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်အမေရိကန်များအားပိုမိုလေ့ကျင့်ရန် ဦး ဆောင်လိမ့်မည်